युएईबाट युरोप जान कति सजिलो छ, कस्तो छ प्रक्रिया र लागत ? - Thulo khabar
काठमाडौं : युरोप कस्को सपना नहोला र ? युरोप अधिकाश नेपालीको सपनामै रहेको छ । यदि तपाईहामिलाई सजिलै युरोप जान सक्ने अवसर मिले के गर्छौ होला ?
दुबईमा रहेका विभिन्न रिक्रुमेन्ट एजेन्सीहरुले आधिकारिक रुपमा कार्यालय नै खोलेर युरोप रोजगारको लागि लैजाने गरेका छन् । लागतको हिसाबले समेत सस्तो रहेकोले दुबईमा रहेका नेपालीहरु युरोप छिरी रहेका छन् ।
करिब २५ हजार देखि ३० हजार दिहराम सम्म लागत लाग्ने गरेको एजेन्सिहरु बताउछन् । कतिपय अवस्थामा भने एजेन्सीको नाम तथा फर्जी एजेन्सिले कतिपय नेपालीहरुको समेत पैसा खाएको समाचार बाहिरिएको छ ।
त्यसैले हामी सल्लाह दिन्छौ दुबई सरकारको आधिकारिक कानुन र नियम अनुसार खुलेका एजेन्सीहरु मार्फतबाट नै कुनै पनि प्रोसेस गर्नु होला । र सम्पुर्ण जानकारी लिएर, आफू आस्वास्त भएर मात्रै कुनै पनि निर्णय लिन र आग्रीम पैसा नबुझाउन सल्लाह दिन्छौ ।